ओलीको शंशाकलाई व्यङ्ग्य -... :: सुजिता कार्की :: Setopati
ओलीको शंशाकलाई व्यङ्ग्य - ‘खुराफातमा पिएचडी, विद्यावारिधीहरूको बुद्धिले यसपालि घाम ताप्छ’
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, पुुस २६
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालालाई लक्षित व्यङ्ग्य गरेका छन्।
बुधबार उपचारका लागि थाइल्याण्डको बैंकक प्रस्थान गर्नुअघि ओलीले खुराफातमा पिएचडी गरेका डाक्टर भन्दै कोइरालालाई व्यङ्ग्य गरेका हुन्।
कोइरालाले १६ पुसमा मेलमिलाप दिवसको अवसरमा वाम गठबन्धन फुटाउनु नै कांग्रेसको रणनीति हुने बताएका थिए। ‘वाम एकता भाँड्ने निरर्थक अभ्यास, मिहिनेत नगरे हुन्थ्यो यहाँ कतिपय खुराफाती विद्यामै डाक्टर गरेकाहरू लागेका छन्’, ओलीले भने, ‘खुराफाती विषयमै पिचएडी गरेका छन्। अर्को विषय केमा गरे? थाहा भएन मलाई। तर, केही पिएचडी यस्ता छन् जो खुराफातमा पिएचडी गरेका छन्।
ओलीले केही व्यक्तिहरू दुई पार्टीको एकताबाट आत्तिएको र तर्सिएको दाबी गरे। ‘किन तर्सिएका हुन् हामी बुझ्दैनौँ। ति शक्तिहरूले यसलाई(एकतालाई) बिथोल्नलाई नाङ्गै, अरुका मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने, एकता देख्न नसक्ने, देशलाई अस्थिरतामा धकेल्न/फर्काउन खोज्ने, स्थिरतातर्फ जान नदिने खुलेआम घोषणाका साथ केही प्रतिक्रियावादी भूमिकामा उद्धत भएको देखिन्छ’, ओलीले भने, ‘म भन्न चाहान्छु सबैले सुन्नेगरी यी प्रयासहरू सफल हुने छैनन्। ती सबै प्रयास सफल हुँदैनन्।’
उनले वाम एकता नहुने तर्क गर्नेहरूले ‘घाम ताप्ने’ बताए। ‘यी विद्यावारिधीहरूलाई म भन्दिन चाहान्छु यिनका बुद्धिले यसपटक घाम ताप्छ। यो हिउँदमा घाम ताप्छ पार्टी एकता हुन्छ। ‘ओलीले माओवादी केन्द्रसँग तालमेलबाट विकसित हुँदै पार्टी एकता अगाडि बढ्ने बताए। एकतापछि अध्यक्ष को हुने? भन्ने प्रश्नमा भने ओलीले जवाफ दिनु हतारो हुने बताए।
‘एकता छिट्टै गर्दैछौँ। अहिले जवाफ दिनु हतारो हुन्छ। दुई चार वर्षपछि भए पो, हप्ता पन्ध्र दिनमा हुने भएपछि किन अहिले हतारिने? कुराकानी सन्दर्भमै आइहाल्छ। ‘ओलीले पार्टी लिडरसीप व्यवस्थापनको समस्या नरहेको बताए। उनले सरकारका निकट पुगेर कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको देखेका पत्रकारले व्यवस्थापनमा प्रश्न गर्ने गरेको बताए।
‘हामीलाई गरीबको व्यवस्थापन, चिसोमा कम्बल बाँड्ने.. तिनीहरूको व्यवस्थापनको चिन्ता छ। सरकारसँग पत्रकारको भेट भएकाले प्रभाव परेको होला’, ओलीले भने, ‘सरकारको छेवैछेवैमा कार्यकर्ताले पैसा बुझेको देख्नुहुन्छ। दाई भन्नेको व्यवस्थापन। अनि व्यवस्थापन भनेको यस्तो रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २६, २०७४, ०४:१५:०९